Somali - Senate District 62 Democratic-Farmer-Labor (SD62 DFL)
U codee Xisbiga DFL ka doorashada dhacaysa Talaadada 6 November. Xisbiga DFL ku wuxuu u taaganyahay waxaad aaminsantahay. Waxaan taageerraa:Caafimaadka oo laga dhigo in uu qof kasta awoodi karo Waxaan horay ugu istaagnay in aan wax ka qabano arintaxawaaladaha. Haddana waxaan ka shaqeeyna xalintooda Ka hortagidda iyo daaweynta aatisamka (autism)Waxbarasho qiimo lehGuryo dadka leh & kuwa kireeystaba ay awoodi karaanDifaacida xuquuqda bini’aadamka & xoriyadda muwaadinka. XANNIBIDDA CODAYNTA – KU CODEE MAYA
Isbadelka ku dhacaya shati (MN ID) lagu xidho codeeyahu wuxuu iyadoon loo baahnayn baa bi’inayaa qaabkaynu u codayno oo ugu fiican wadanka. Wuxuu ka ilaalinayaa dadka waawayn iyo dadka laga awooda roon yahay (people of color) ee reer Minnesota inay codeeyaan, wuxuuna meesha ka saarayaa isdiiwaangalinta maalinta doorashooyinka ee aan hada xaq u leenahay. In dastuurka la bedelo si muwaadiniinta sharciga raaca ee reer Minnesota loogu adkeeyo inay codeeyaan waa khalad! http://seiumn.org/somali/Cayimida Guurka- Maya Ku Codee! Guurku wuxuu ku salaysan yahay jacayl iyo  isu dibrid bixid iyo waliba awooda aad qoyskaaga ku difaacanaysid. Xataa hadaad ka soo horjeedo khaniisnimada, isbadalkani wax sharci ah mabadalayo.Hadaad taageerto inuu qofku xaq u leeyahay doorashada qofkuu jecel yahay, isbadalkani wuxuu dastuurkeena u ogalaanayaa inay dawladdu faragaliso. Wixii su’aalo ah ama hadaad rabto in tegidda rugta cod bixinta lagaa caawiyo, la xidhiidh Mustafa 612-636-9165WATCH ILHAN OMAR discuss the two amendments and other election issues on BelAhdan. (In English)
Somali form Please support these other DFL candidatesEden Prairie: Laurie McKendry, Yvonne Selcer, Tori HillEdina & Bloomington: Melisa FranzenCedar-Riverside Minneapolis: Kari Dziedzic, Phyllis KahnWixii su’aalo ah ama hadaad rabto in tegidda rugta cod bixinta lagaa caawiyo, la xidhiidh Mustafa 612-636-9165